Iran: Balatarin, Tantara Momba Ny Median’Olon-Tsotra Nahita Fahombiazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2017 17:17 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Italiano, فارسی, 繁體中文, 简体中文, English
Mehdi Yahyanejad no mpanorina ilay tranonkala tena mahomby Balatarin. Balatarin (izay midika hoe ‘ambony indrindra’ amin'ny teny persiana) dia habaky ny vondrom-piarahamonina izay ahafahan'ny mpiserasera mandefa rohy ao amin'ny pejy habaka tian'izy ireo, ahitana fanasongadinana ny iraniana mpijery (mpitsidika ny pejy habaka). Ny hevitra fototra dia fifangaroan'ny reddit, digg, newsvine, ary ny del.icio.us.
Tao anatin'ny roa taona latsaka, lasa loharanom-baovao sy fifandraisana manan-danja ny Balatarin. Mizara amintsika ny tantarany tamin'ny Balatrin ao anatin'ity antsafa ity i Mehdi, izay manana PhD amin'ny Fizika tao amin'ny MIT sady mpiara-manorina sy filoha tale jeneralin'ny Adoptic.com.
Nampiasa ny Digg ho maodely ianao. Mihevitra ve ianao fa ho lasa malaza koa ny facebook Iraniana?
Tsy ho ela. Amin'izao fotoana izao, mifantoka amin'ny tetikasa hafa aho, Adoptic.com, izay aingam-panahy tamin'ny traikefa azoko tamin'ny Balatarin. Ny hevitra dia ny hamela ny bilaogera hampiroborobo ny votoatiny amin'ny fampiasana ny sehatra bilaogin'izy ireo manokana na ny an'ny hafa. Miezaka mamorona fomba malama tanteraka amin'ny fitadiavana sy fampiroboroboana votoaty aho. Misy ihany koa ireo algorithma mahafinaritra marobe izay ampiasaina ao anatin'ny dingana.